Ciidamada Xoogga Dalka oo sheegay in ay jawaab ka bixinayaan duqaymo ay Kenya ka waddo Soomaaliya
Somger (Gedo) 21 Maajo 2020 – Wararka maanta.
Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa cambaareeyey Ciidanka Cirka ee dowladda Kenya oo duqeymo ay ka geysteen gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Gedo khasaare nafeed ugu gaystey bartilmaameedyo rayid ah.
Sidoo kale weerar cireedyadaan oo sababay khasaare nafeed iyo mid xooleed dabjoog iyo duurjoogba ayay diyaaradaha Kenya habeenadii lasoo dhaafay ka gaysanayeen deegaanno ay ka mid yihiin: Cows-Qurun, Kaakuma, Lafa-Geri, Buusaar iyo Faxfaxdhuun oo Gedo ku wada yaalla.
Sarkaal ka tirsan Ciidanka Xoogga dalka oo la yiraahdo Korneyl Xasan Aadan Biixi, oo ka mid ah Ciidanka Xoogga ee Gedo ayaa saxaafadda maxalliga ah u sheegay in dayuuradaha Kenya ay halkaa ka gaysteen duqaymo aan loo aaba yeelin, gaar ahaan 24-kii saacadood ee ugu dambeeyay.
Iyadoo sarkaalka intaa raaciyey inay arrintan si dhow isha ugu hayaan ”dadka, duunyada, iyo duur-joogta dhimanaysa”, isla markaana ay ka fal-celin doonaan oo ay kula xisaabtami doonaan dowladda Kenya oo beegsanaysa dhul daaqsiimeed iyo degaanno camiran oo uu rayidku deggan yahay, waloow uusan sharrixin sida.
Xalay oo u dambeysay waxay Kenya duqaysay deegaanno ay ka mid yihii Sama-roone iyo Ciise-guul iyo dhul badan oo dhaca bariga gobolka Gedo.” ayuu yiri Kornayl Xasan Aadan Biixi.